Kungani u-Edson Glauber? - Ukubalwa phansi kuya eMbusweni
Izicelo zikaJesu, iNkosazana yethu, kanye noSt. Joseph ku-Edson Glauber, oneminyaka engamashumi amabili nambili, kanye nonina uMaria do Carmo, zaqala ngo-1994. Baqala ukwaziwa ngokuthi ngohlelo lwe-Itapiranga, olwaqanjwa ngegama lasedolobheni labo lokuzalwa ehlathini laseBrazil laseBrazil. . INdlovukazi uMariya yaziveza njenge "Ndlovukazi yeRosary neyekuthula," kanti nemiyalezo yayigcizelela ukuthandaza iRosary nsuku zonke- ikakhulukazi irosari yomndeni, ukuvala umabonakude, kuyiwa kwi-Confession, e-Eucharistic Adoration, kanye nasesiqinisekisweni ukuthi "iSonto leqiniso iSonto lamaRoma Katolika, nokuthi" isifufula sezijeziso "sisondela. U-Lady wethu wakhombisa u-Edson ezulwini, isihogo nesihlanzo
Ngaphezu kwalokho, i-Our Lady icele ngqo ukushunyayelwa kobuKristu okuqondiswe ngendlela ehlukile ebusheni, ukwakhiwa kwendawo elula yokuhambela abahamba ngezinyawo, kanye nesikhungo ekhishini lesobho e-Itapiranga lezingane eziswele.
Ubaba ka-Edson, owayengumlutha wotshwala obunobudlova oguqulwe ngenxa yethonya lezinhlelo zokusebenza, watholakala ngokuhamba kwesikhathi, emadolweni ethandaze ekuseni kakhulu eRosary egumbini lokuhlala lomndeni, kwathi iLady Lady yethu yathi indawo enkulu eyayinayo Kwakungokwakhe futhi kwakunguNkulunkulu. INdlovukazi yeRosary yathinta ngesandla sakhe umfula wamanzi ogeleza usuka endaweni yama -apparitions e-Itapiranga wacela ukuthi amanzi abalethele abagulayo ukuze bezophulukiswa. Inani elikhulu lokuphulukisa ngokuyisimangaliso kuye kwabikwa, kwahlolwa kahle odokotela, futhi abaningi badluliselwa kwi-Apostolic Prefecture ye-Archdiocese yase-Itacoatiara. U-Lady wethu uphinde wacela ukuthi kwakhiwe i-chapel, namanje esemi.
Ngo-1997, imilayezo ye-Itapiranga yaqala ukugcizelela ukuzinikela eSt Joseph's Chaste Heart, futhi uJesu wacela ukuthi uSuku Lomkhosi olandelayo lungeniswe eBandleni:
NgoLwesithathu, ngoJuni 11, 1997, usuku, lwale Mkhosi oceliwe ngaloyo nyaka, uMama Obusisiwe washo lokhu okulandelayo, ebheka uchungechunge lokuhlwaya lomndeni oNgcwele okwenzeka eGhiaie de Bonate enyakatho ye-Italy ngeminyaka yama-1940— imibono lapho ukuzinikela eSt Joseph nakho kwamenyezelwa khona:
U-Edson wayengakaze ezwe ngo-Ghiaie di Bonate noma yikuphi ukubuka okuthile lapho.
Njengoba sekwenzekile kwamanye amaapparitions aseMarian, njengaseFatima naseMedjugorje, iLady Yethu yembulela u-Edson izimfihlo eziphathelene nokumiselwe iSonto nomhlaba, kanye nezehlakalo ezimbi kakhulu zesikhathi esizayo okufanele abantu bangaguquki. Njengamanje, kunezimfihlo eziyisishiyagalolunye: ezine eziphathelene neBrazil, ezimbili zomhlaba, ezimbili zeSonto, kanti esisodwa salabo abaqhubeka nokuphila impilo yesono. Unkosikazi wethu utshele u-Edson ukuthi uzoshiya ebonakalayo eNtabeni Yesiphambano eduze kwendawo e-Itapiranga. Ukuvela phambi kwesiphambano sentaba eduze kwendawo yokusebenzela, uthe:
UDom Carillo Gritti, uMbhishobhi wesifunda-bhishobhi sase-Itacoatiara, uvumile isigaba se-1994-1998 semapareythi ngokuthi "angaphezu kwawemvelo" okwaqala ngoMeyi 31, 2009 futhi uqobo wabeka itshe legumbi leSancwele entsha e-Itapiranga ngoMeyi 2, 2010. Le milayezo ku-Edson Glauber, ongamakhasi angaphezu kuka-2000, ahambisana kakhulu neminye imithombo engokwesiprofetho ethembekile futhi unesici esiqine se-eschatological. Baye baba yizinto zocwaningo oluningi, kwathi udokotela oyiMarkologist uDkt Mark Miravalle waseSteubenville University wanikela incwadi kubo, ebizwa ngokuthi Izinhliziyo Ezintathu: Izindlela zikaJesu, uMariya, noJoseph wase-Amazon.
Kusukela uDem Gritti abulawa ngo-2016, kube nengxabano namanje engalungiswa phakathi kwe-dayosesi yase-Itacoatiara kanye nenhlangano eyasungulwa ngu-Edson Glauber nomndeni wakhe ukuxhasa ukwakhiwa kweSancwele. IDiocesan Administrator ixhumane neBandla ngeMfundiso yeNkolo futhi yathola isitatimende ngonyaka we-2017 sokuthi iCDF ayizibhekanga njengezifiso zaphezulu, okuyisikhundla okubuye kwagcinwa yi-Archdiocese yaseManaus. I-CDF, eyayikhokhelwa ngukhadinali Gerhard Ludwig Müller ngaleso sikhathi, ayishongo ngumboni wesibili, uMaria do Carmo, naye ohlangane nokwamukelwa nguBishop Gritti oshonile manje.
Ngokubheka ukuthi ama -apparitions awasavunyelwa ngokusemthethweni (kepha awulahlwa ngokusemthethweni), kungabuzwa ngokusemthethweni ukuthi kungani sikhethe ukufaka izinto ezitholwe ngu-Edson Glauber kule webhusayithi. Izenzo zomthetho ezenziwa yi-CDF zikhawulela kuphela i-1) ukukhuthaza okusemthethweni kwemibhalo ka-Edson, 2) "ukusatshalaliswa kabanzi" kwemiyalezo yakhe ngu-Edson uqobo noma 'Inhlangano' yakhe e-Itapiranga, kanye no-3) ukugqugquzelwa kwemiyalezo ngaphakathi kwe-Prelature ye I-Itacoatiara. Sihlala silandela ngokuphelele yonke le miyalelo; futhi, uma imilayezo yakhe igxekwa ngokusemthethweni ngokuzayo, siyobe sesisusa kule webhusayithi.
Yize kuyiqiniso ukuthi uDkt Miravalle wayikhipha incwadi yakhe ngemuva kokufunda idokhumenti ye-CDF, kubalulekile futhi ukuqaphela ukuthi amawebhusayithi ambalwa emhlabeni jikelele aqukethe izinsolo zokuprofeta ezaziwa ngokwethembeka ezimfundisweni zeSonto yize kunjalo anqume ukuqhubeka nokushicilela izinguqulo imiyalezo ye-Itapiranga. Lokhu mhlawumbe kuchazwe kangcono ukuthi, ngesikhathi sokuphila kukaDom Carillo Gritti, uhlelo lwakwa-Itapiranga lujabulele ukwamukelwa okungajwayelekile futhi abahlaziyi abaningi baphakamise imibuzo maqondana nenqubo yezenzo zikaDiocesan Administrator. Ngaphezu kwalokho, ukuphuthuma kokuqukethwe kwemilayezo kungukuthi ukumiswa kokusatshalaliswa kwalesi sisetshenziswa kuze kube yilapho isinqumo senkantolo sika-Edson Glauber (esingathatha iminyaka eminingana) singaba sengozini yokuthulisa izwi lasezulwini ngesikhathi lapho kudingeka kakhulu ukulizwa.
Imilayezo evela ku-Edson Glauber
... kepha ukuvikelwa kungaphakathi kwenhliziyo engenacala.
Edson - Ungalahli Ukholo!
Uyakuthanda ngothando olukhulu kangaka.
Edson - Nakekela Amakhaya Akho
Hlanzani konke ukungcola emakhaya enu.
... awukwazi ukuba namandla okulwa.
... ukuqoqa izingane zakhe ngomkhuleko.
Edson - Yini Okungenakwenzeka Kuwe
... iNdodana yami inikela ngomthandazo weRosari noJesu.
Edson - IDosari Yansuku zonke
Thandaza futhi usheshe. Thandaza futhi usheshe. Thandaza futhi usheshe.
Edson - Thembela Othandweni LukaJesu
Igalelo elibulalayo liza maduze eSontweni.
U-Edson Glauber - Enhliziyweni YeNdodana Yami, Ngeke Usabe Lutho
Noma isiphambano, noma sezivivinyo, noma sokushushiswa okuzoza emhlabeni.
U-Edson Glauber - Ihora Elinqumayo Liyeza
Amagama ami ashiwo lapha azogcwaliseka.
... ukukwenza ukhale izinyembezi ezibabayo ngokuba ngigcine ngingezwa izwi lami likamama.
U-Edson Glauber - Lungiselela Izingxabano Zomhlaba Wonke
Ukuhlupheka okukhulu okunjengokungakaze kwenzeke ngaphambili.
U-Edson Glauber - Buyela eNkosini Ngokushesha Okungenzeka
Imicimbi emihle izoshintsha izimpilo zakho kuze kube phakade.
U-Edson Glauber - Izono Zibangela Ukwahlulela KukaNkulunkulu
Shintsha izinhliziyo zakho futhi iNkosi izaba nesihe kini ngamunye nemindeni yenu.
U-Edson Glauber -Humanity Usazonyakaziswa Masinyane Ngezehlakalo Ezinkulu
Wonke umbuso wesono uzachithwa ngobulungiswa baphezulu.
U-Edson Glauber - Kushiywe imizuzu emithathu kwiwashi likaNkulunkulu
... ukuze isintu siguqulwe ngaphambi kwemicimbi emikhulu ezowunyakazisa unomphela.
Edson Glauber - St. Joseph Uzosiza
Memela usizo lwami ngokuzethemba nangokholo.
Edson Glauber - Ukuhlanzwa KweSonto
Ngenxa yezono, amahlazo nokonakala.
U-Edson Glauber - Umbono weVatican
U-Edson Glauber - Izikhathi zivuthiwe
Guqula, ukuguqula, ukuguqula!
U-Edson Glauber - Inkemba Yomlilo iphakanyisiwe
Ubuntu bufike emaphethelweni kwalasha.
Usathane ubashayile ngenkani.
U-Edson Glauber - Abaningi Bayasuthwa
UNkulunkulu ukhombisa abaningi ubuqiniso bemiphefumulo yabo uqobo phambi Kwakhe.
← Kungani Umphefumulo Ongalindelekile?
Luisa Picarretta - Ekujezisweni →